Photo Mupepeti Movavi inowanikwa chete 1 euro | Ndinobva mac
Kana zvasvika pakugadzirisa mifananidzo yedu, isu tine yedu yakawanda nhamba yekushandisa zvese muMac App Store uye kunze kwayo. Kana isu tiri mumwe wevashandisi avo vanongoisa mafomu anowanikwa muMac App Store, isu tinayo Photo Editor Movavi, a yakapusa pikicha midhiya yatinogona kunatsiridza edu ekutora.
Pane kanopfuura kamwe chiitiko, zvirokwazvo wakatora pikicha mairi chinhu chinoratidzika chinofanira kunge chiripo, asi izvo zvatakaona apo isu tiri kuongorora mifananidzo. Panguva iyoyo, kunze kwekutuka pane yakawanda nhamba yezviitiko, tinogona kushandisa Photo Editor Movavi, pikicha mupepeti iyo inotibvumidzawo kudzima zvisingadiwe zvinhu kubva kumifananidzo.
Asi pamusoro pezvo, zvinotibvumidzawo bvisa kumashure kubva pamifananidzo kuvatsiva zviri nyore pamwe nevamwe vatinoda. Izvo zvinotibvumidza isu kuti tiite zvekutanga magadziriso senge kugadzirisa modzimbo, kuzadza, kusiyanisa, kuisa mafirita uye kuwedzera watermark uye zvinyorwa ...
Main maficha ePikicha Edhira Movavi
Zvirimwa, tenderera kana kushandura iwo.
Nemaoko gadzirisa hue, kuzadza, tembiricha tembiricha, uye zvimwe zvemifananidzo yako.
Ruramisa mufananidzo neiyo yakatarisa otomatiki kana nemawoko.
Bvisa zvinhu otomatiki.
Cheka zvinhu kubva kumashure uye wozvitsiva nezvimwe mifananidzo.
Isa mafirita, wedzera zvinyorwa uye watermark.
Kubvira kwekuburitsa mifananidzo muBMP, DPX, JPEG, PBM, PCX, PGM, PNG, PPM, TGA, TIFF, XBM fomati.
Mutengo wakajairika wePikicha Edhira Movavi muMac App Store ndeye 16,99 euros, mutengo unodzikiswa kwechinguva kusvika kungori ma1,09 euros. Kukwidziridzwa kwekuwana iyi kunyorera kweinopfuura imwe euro kunopera mangwana, saka usafunge kaviri usati watora mukana weichi chipo kana mabasa anopiwa nechishandiso ichi achikubatsira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Photo Mupepeti Movavi inowanikwa chete 1 euro
OSRAM Smart +, inonakidza mhando yezvigadzirwa zvinoenderana neKeKKit